နှရောသီနှငျ့ ရကြေောကျရောဂါ | OnDoctor
By OnDoctor Editor	 On Apr 1, 2018 Last updated Nov 9, 2019
မကွာမီ အခွခေံပညာကြောငျးမြားတှငျ အတနျးတငျစာမေးပှဲမြားပွီးဆုံးပွီး နှရောသီ ရကျရှညျကြောငျးပိတျတော့မညျဖွဈသညျ။ နှရောသီကြောငျးပိတျရကျတှငျ ကြောငျးသားမြားအနနှေငျ့ အတနျးဖျော သူငယျခငျြးမြားနှငျ့အတူ လလေ့ာရေးခရီးမြား၊ ဘုရားဖူးခရီးစဉျမြားနှငျ့ အပနျးဖွခေရီးစဉျမြား သှားလရှေိ့ကွသညျ။ အခြို့သော ကြောငျးသားမြား အနနှေငျ့ ကြောငျးပိတျရကျမြားတှငျ အမြားနညျးတူ ခရီးမထှကျနိုငျပဲ ကနျြးမာရေးပွဿနာ မြားကွောငျ့ အိမျတှငျ ကနျြနခေဲ့ရသညျမြားလညျးရှိသညျ။ အဆိုပါပွဿနာမြားထဲမှ နှရောသီကြောငျးပိတျရကျမြားအတှငျး ကြောငျးသားအရှယျ ကလေးငယျမြားတှငျ အဖွဈအမြားဆုံး ဖွဈသော ပဲသီတာချေါ ရကြေောကျရောဂါ အကွောငျး သိသငျ့သညျမြား ဖျောပွပေး လိုကျပါသညျ။
ဆောငျးအကုနျနှအေကူး နှဦေးရာသီမြားဖွဈသော မတျလနှငျ့ ဧပွီလမြားအတှငျး အမြားဆုံးဖွဈပှားလရှေိ့ပွီး ကလေးမြားတှငျ ဖွဈရိုးဖွဈစဉျကဲ့သို့ မွငျတှရေ့သော ကူးစကျ ရောဂါတမြိုးဖွဈသညျ။ အင်ျဂလိပျအမညျ Chicken Pox ဟုချေါဆိုပွီး မွနျမာလို ပဲသီတာ (သို့မဟုတျ) ရကြေောကျရောဂါဟု ချေါဆိုသညျ။
ရကြေောကျရောဂါသညျ ဗရေီဆဲလားဇိုစတာ (Varicella Zoster) ချေါ ဗိုငျးရပျဈ ပိုးကွောငျ့ဖွဈပှားရခွငျးဖွဈကာ ကလေးငယျမြားတှငျ အမြားဆုံးဖွဈပှားနိုငျသညျ။ ရောဂါ ဖွဈပှားသူမြား၏ ၉၀% သညျ အသကျ ၉နှဈမှ ၁၄ နှဈအရှယျ ကလေးမြားဖွဈသညျ။ ကနျြးသော ၁၀% သညျလညျး အသကျ ၁၈နှဈအောကျ လူငယျလူရှယျမြားသာဖွဈကာ မိနျးကလေးမြားထကျ ယောကျြားလေးမြားတှငျ ပိုမို ဖွဈပှားနိုငျသညျ။
ကလေးငယျမြားတှငျ ထိုဗိုငျးရပျဈပိုးကူးစကျခံရလြှငျ ခန်ဓာကိုယျတှငျ (အထူးသဖွငျ့ ရငျဘကျ၊ ဝမျးဗိုကျမြားတှငျ) အနီစကျ အဖုအပိနျ့မြား ထှကျလာတတျကာ မနနေိုငျ မထိုငျနိုငျအောငျ ကုတျမိနခွေငျးနှငျ့ အလှနျအမငျးယားယံခွငျးကွောငျ့ စတငျသတိထား မိနိုငျသညျ။
ရောဂါပိုးစတငျဝငျရောကျပွီး တဈရကျအတှငျး ရုတျတရကျဗိုငျးရပျဈပိုး ကူးစကျ ဝငျရောကျခွငျးကွောငျ့ဖွဈသော လက်ခဏာမြားဖွဈသညျ့ ခြောငျးဆိုးခွငျး၊ နှာစေးခွငျး၊ ကိုယျပူခွငျးစသညျ့ လက်ခဏာမြား ခံစားရနိုငျသညျ။ ထို့နောကျ တကိုယျလုံးအနှံ့ အနီစကျအဖုလေးမြား အုပျစုလိုကျ ထှကျလာတတျပွီး ၎င်းငျးအနီစကျအဖုလေးမြားမှ အရညျကွညျဖုလေးမြား ဖွဈသှားတတျသညျ။
အခြို့သော ကလေးမြားတှငျတော့ ဗိုငျးရပျဈပိုး ကူးစကျခံရပွီး နာရီပိုငျးအတှငျး အရညျကွညျဖုလေးမြားဖွဈလာတတျသညျ။ ဗိုငျးရပျပိုးကူးစကျခံရပွီး ရကျသတ်တပတျ အတှငျး အရညျကွညျဖုလေးမြား တဖွညျးဖွညျးခွောကျသှားနိုငျပွီး (၇)ရကျ ကြျောလာသညျနှငျ့ အကုနျလုံးခွောကျကာ ကှာကြ သှားလိမျ့မညျ။ နောကျပိုငျးတှငျ အမာရှတျပါမကနျြ သူ့အလိုလို ပြောကျကငျးသှားနိုငျသညျ။
ရကြေောကျရောဂါဖွဈပှားခံစားရသော ကလေးငယျမြားအနနှေငျ့ ဗိုငျးရပျပိုး ကူးစကျခံရခွငျးကွောငျ့ဖွဈသော အခွားလက်ခဏာမြားဖွဈသညျ့
– ကိုယျပူခွငျး၊ တခါတရံ အပွငျးဖြားခွငျး
– ခေါငျးကိုကျခွငျး၊ နားကိုကျခွငျး
– ခြောငျးဆိုးခွငျး၊ လညျခြောငျးနာခွငျး
– တကိုယျလုံး မလှုပျခငျြ၊ မသယျခငျြအောငျ နုံးခြိနခွေငျး စသညျ့ လက်ခဏာ မြားကိုလညျး ခံစားရနိုငျသညျ။
ဗိုငျးရပျဈပိုးကူးစကျခံထားရသောသူမှ ခြောငျးဆိုး၊ နှာခြေ လိုကျသောအခါ ထှကျလာသော အရညျ၊ အမှုနျမြားတှငျပါလာသညျ့ ပိုးမြားကို ရှုရှိုကျမိခွငျး ကွောငျ့သျော လညျးကောငျး
ရောဂါရှိသူ၏ အနီစကျ၊ ရညျကွညျဖုတှမှေထှကျသော အရညျကို တိုကျရိုကျထိတှမေိ့ခွငျးကွောငျ့သျောလညျးကောငျး ကူးစကျနိုငျပါတယျ။
(၁) ရကြေောကျချေါ ပဲသီတာဟာ အန်တရာယျမရှိလှသလို သိပျပွီး စိုးရိမျစရာလညျး မလိုပါ။ အရညျကွညျဖုလေးမြားပြောကျကငျးရနျ မညျသညျ့ဆေးမြှ လိမျးရနျမလိုသလို သနပျခါးလညျး လိမျးရနျမလိုပါ။
(၂) အရညျကွညျဖုလေးမြားသညျ အခြိနျတနျလြှငျကှာကသြှားမညျဖွဈပွီး အမာရှတျပါ မကနျြ ပြောကျကငျးသှားမညျဖွဈသညျ။
(၃) လကျသညျးဖွငျ့ကုတျခွငျးနှငျ့ သနျ့ရှငျးမှုအားနညျးခွငျးကွောငျ့သာ အနာအတှငျး ပိုးဝငျသှားနိုငျပွီး အမာရှတျသေးသေးကနျြတတျသညျ။ ထို့ကွောငျ့သနျ့ရှငျးစှာနထေိုငျရနျ လိုသညျ။
(၁) ရခြေိုးလြှငျ ရနှေေးနှေးနှငျ့ခြိုးပေးပါ(သို့) ရနှေေးစိမျအဝတျနှငျ့ ရပေတျတိုကျပေးပါ။
(၂) ဗိုကျတာမငျစီ၊ ဗိုကျတာမငျအေ၊ ဗိုကျတာမငျအီးစသညျ့တို့ပါဝငျသော အားဆေးမြား တိုကျကြှေးနိုငျသညျ။
(၃) အုနျးရညျတိုကျခွငျး၊ ရမြေားမြားတိုကျခွငျး၊ သနျ့ရှငျးလတျဆတျသော သီးနှံမြား စားသုံးခွငျးဖွငျ့လညျး ကိုယျခံအားစနဈတကျစရေုံသာမက ရောဂါသကျသာစနေိုငျသညျ။
(၄) အဖြားရှိ(ကိုယျပူ)ပါက Paracetamol (အရညျ/အခဲ) တိုကျကြှေးနိုငျသညျ။
(၅) လညျခြောငျးနာလြှငျ ဆားရညျဖွငျ့ ပလုတျကငျြးပေးနိုငျသညျ။
(၆) အလှနျအမငျးယားယံ၍ နရေခတျနလြှေငျ အဝတျသနျ့သနျ့ကို ရနှေေးဖွငျ့တို့၍ သနျ့စငျပေးနိုငျသညျ။ Calamine, Caladryl စသညျ့ ဆေးမြားလညျး လိမျးပေးနိုငျသညျ။
(၇) ယားယံမှုသိပျဆိုးလြှငျ Antihistamine ချေါ ယားယံခွငျးကိုသကျသာစသေညျ့ ဆေးမြား တိုကျကြှေးနိုငျသညျ။ (Steroid ဆေးဝါးမြား (သောကျဆေး၊ လူးဆေး) အသုံး မပွုသငျ့ပါ)
(၈) ရကြေောကျအဖုလေးမြားကို ယားယံ၍ကုတျမိရာမှ လကျသညျးမှတဆငျ့ ပိုးဝငျ ရောကျကာ ပွညျတညျခွငျးနှငျ့ အမာရှတျမြားဖွဈစနေိုငျသဖွငျ့ ကလေးလကျသညျးကို ညှပျပေးထားရနျလိုသညျ။ လကျသညျးညှပျပွီးလြှငျလညျး စူးရှမနစေရေနျ တံစဉျးဖွငျ့ ညှိပေးထားသငျ့သညျ။
(၉) ရကြေောကျရောဂါရှငျ၏ အဝတျအစားမြားကိုလညျး သီးသနျ့လြှျောဖှပျပေးရမညျ။
(၁၀) အဖြားမကလြှငျ၊ ရောဂါကူးစကျမှုပွငျးထနျလြှငျနှငျ့ အဖုမြား၊ အနာမြားပိုးဝငျပွီး ပွညျတညျနာမြား ဖွဈနလြှေငျ လိုအပျသောကုသမှုခံယူနိုငျရနျအတှကျ နီးစပျရာဆေးရုံ၊ ဆေးခနျးသို့သှား၍ ဆရာဝနျနှငျ့စနဈတကြ တိုငျပငျကုသမှုခံယူရမညျ။
(၁) အသကျ(၅)နှဈအောကျကလေးငယျမြားအား အသကျ(၁)နှဈတှငျတကွိမျ (၅)နှဈ တှငျတကွိမျ ကာကှယျဆေးနှဈကွိမျ ထိုးနှံခွငျးဖွငျ့ ကာကှယျနိုငျသညျ။
(၂) ရကြေောကျလုံးဝမဖွဈဖူးသူ အသကျ(၁၈)နှဈအောကျလူငယျမြားတှငျလညျး ဆရာဝနျနှငျ့တိုငျပငျပွီး ကာကှယျဆေးကွိုတငျ ထိုးနှံထားနိုငျသညျ။
(၃) ရကြေောကျရောဂါဖွဈပှားဖူးခွငျးမရှိသော မိခငျလောငျးမြားအနနှေငျ့ ကိုယျဝနျမဆောငျခငျ တလအလိုကတညျးက ကာကှယျဆေးမြားပွညျ့စုံအောငျ ထိုးထားခွငျးဖွငျ့ မှေးဖှားလာမညျ့ကလေးအတှကျ ကွိုတငျကာကှယျပေးထားနိုငျသညျ။
ကြောငျးပိတျရကျမြားအတှငျး ရကြေောကျရောဂါကငျးစငျသူမြား ဖွဈကွပါစေ….
Author : တငျ့တယျ
မကြာမီ အခြေခံပညာကျောင်းများတွင် အတန်းတင်စာမေးပွဲများပြီးဆုံးပြီး နွေရာသီ ရက်ရှည်ကျောင်းပိတ်တော့မည်ဖြစ်သည်။ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်တွင် ကျောင်းသားများအနေနှင့် အတန်းဖော် သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ လေ့လာရေးခရီးများ၊ ဘုရားဖူးခရီးစဉ်များနှင့် အပန်းဖြေခရီးစဉ်များ သွားလေ့ရှိကြသည်။ အချို့သော ကျောင်းသားများ အနေနှင့် ကျောင်းပိတ်ရက်များတွင် အများနည်းတူ ခရီးမထွက်နိုင်ပဲ ကျန်းမာရေးပြဿနာ များကြောင့် အိမ်တွင် ကျန်နေခဲ့ရသည်များလည်းရှိသည်။ အဆိုပါပြဿနာများထဲမှ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်များအတွင်း ကျောင်းသားအရွယ် ကလေးငယ်များတွင် အဖြစ်အများဆုံး ဖြစ်သော ပဲသီတာခေါ် ရေကျောက်ရောဂါ အကြောင်း သိသင့်သည်များ ဖော်ပြပေး လိုက်ပါသည်။
ဆောင်းအကုန်နွေအကူး နွေဦးရာသီများဖြစ်သော မတ်လနှင့် ဧပြီလများအတွင်း အများဆုံးဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီး ကလေးများတွင် ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ကဲ့သို့ မြင်တွေ့ရသော ကူးစက် ရောဂါတမျိုးဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်အမည် Chicken Pox ဟုခေါ်ဆိုပြီး မြန်မာလို ပဲသီတာ (သို့မဟုတ်) ရေကျောက်ရောဂါဟု ခေါ်ဆိုသည်။
ရေကျောက်ရောဂါသည် ဗေရီဆဲလားဇိုစတာ (Varicella Zoster) ခေါ် ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးကြောင့်ဖြစ်ပွားရခြင်းဖြစ်ကာ ကလေးငယ်များတွင် အများဆုံးဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ရောဂါ ဖြစ်ပွားသူများ၏ ၉၀% သည် အသက် ၉နှစ်မှ ၁၄ နှစ်အရွယ် ကလေးများဖြစ်သည်။ ကျန်းသော ၁၀% သည်လည်း အသက် ၁၈နှစ်အောက် လူငယ်လူရွယ်များသာဖြစ်ကာ မိန်းကလေးများထက် ယောကျာ်းလေးများတွင် ပိုမို ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
ကလေးငယ်များတွင် ထိုဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရလျှင် ခန္ဓာကိုယ်တွင် (အထူးသဖြင့် ရင်ဘက်၊ ဝမ်းဗိုက်များတွင်) အနီစက် အဖုအပိန့်များ ထွက်လာတတ်ကာ မနေနိုင် မထိုင်နိုင်အောင် ကုတ်မိနေခြင်းနှင့် အလွန်အမင်းယားယံခြင်းကြောင့် စတင်သတိထား မိနိုင်သည်။
ရောဂါပိုးစတင်ဝင်ရောက်ပြီး တစ်ရက်အတွင်း ရုတ်တရက်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက် ဝင်ရောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော လက္ခဏာများဖြစ်သည့် ချောင်းဆိုးခြင်း၊ နှာစေးခြင်း၊ ကိုယ်ပူခြင်းစသည့် လက္ခဏာများ ခံစားရနိုင်သည်။ ထို့နောက် တကိုယ်လုံးအနှံ့ အနီစက်အဖုလေးများ အုပ်စုလိုက် ထွက်လာတတ်ပြီး ၎င်းအနီစက်အဖုလေးများမှ အရည်ကြည်ဖုလေးများ ဖြစ်သွားတတ်သည်။
အချို့သော ကလေးများတွင်တော့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ကူးစက်ခံရပြီး နာရီပိုင်းအတွင်း အရည်ကြည်ဖုလေးများဖြစ်လာတတ်သည်။ ဗိုင်းရပ်ပိုးကူးစက်ခံရပြီး ရက်သတ္တပတ် အတွင်း အရည်ကြည်ဖုလေးများ တဖြည်းဖြည်းခြောက်သွားနိုင်ပြီး (၇)ရက် ကျော်လာသည်နှင့် အကုန်လုံးခြောက်ကာ ကွာကျ သွားလိမ့်မည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အမာရွတ်ပါမကျန် သူ့အလိုလို ပျောက်ကင်းသွားနိုင်သည်။
ရေကျောက်ရောဂါဖြစ်ပွားခံစားရသော ကလေးငယ်များအနေနှင့် ဗိုင်းရပ်ပိုး ကူးစက်ခံရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော အခြားလက္ခဏာများဖြစ်သည့်
– ကိုယ်ပူခြင်း၊ တခါတရံ အပြင်းဖျားခြင်း
– ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ နားကိုက်ခြင်း
– ချောင်းဆိုးခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း
– ကြွက်သားများ နာကျင်ခြင်း
– တကိုယ်လုံး မလှုပ်ချင်၊ မသယ်ချင်အောင် နုံးချိနေခြင်း စသည့် လက္ခဏာ များကိုလည်း ခံစားရနိုင်သည်။
ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံထားရသောသူမှ ချောင်းဆိုး၊ နှာချေ လိုက်သောအခါ ထွက်လာသော အရည်၊ အမှုန်များတွင်ပါလာသည့် ပိုးများကို ရှုရှိုက်မိခြင်း ကြောင့်သော် လည်းကောင်း
ရောဂါရှိသူ၏ အနီစက်၊ ရည်ကြည်ဖုတွေမှထွက်သော အရည်ကို တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မိခြင်းကြောင့်သော်လည်းကောင်း ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
(၁) ရေကျောက်ခေါ် ပဲသီတာဟာ အန္တရာယ်မရှိလှသလို သိပ်ပြီး စိုးရိမ်စရာလည်း မလိုပါ။ အရည်ကြည်ဖုလေးများပျောက်ကင်းရန် မည်သည့်ဆေးမျှ လိမ်းရန်မလိုသလို သနပ်ခါးလည်း လိမ်းရန်မလိုပါ။
(၂) အရည်ကြည်ဖုလေးများသည် အချိန်တန်လျှင်ကွာကျသွားမည်ဖြစ်ပြီး အမာရွတ်ပါ မကျန် ပျောက်ကင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
(၃) လက်သည်းဖြင့်ကုတ်ခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းမှုအားနည်းခြင်းကြောင့်သာ အနာအတွင်း ပိုးဝင်သွားနိုင်ပြီး အမာရွတ်သေးသေးကျန်တတ်သည်။ ထို့ကြောင့်သန့်ရှင်းစွာနေထိုင်ရန် လိုသည်။
(၁) ရေချိုးလျှင် ရေနွေးနွေးနှင့်ချိုးပေးပါ(သို့) ရေနွေးစိမ်အဝတ်နှင့် ရေပတ်တိုက်ပေးပါ။
(၂) ဗိုက်တာမင်စီ၊ ဗိုက်တာမင်အေ၊ ဗိုက်တာမင်အီးစသည့်တို့ပါဝင်သော အားဆေးများ တိုက်ကျွေးနိုင်သည်။
(၃) အုန်းရည်တိုက်ခြင်း၊ ရေများများတိုက်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သော သီးနှံများ စားသုံးခြင်းဖြင့်လည်း ကိုယ်ခံအားစနစ်တက်စေရုံသာမက ရောဂါသက်သာစေနိုင်သည်။
(၄) အဖျားရှိ(ကိုယ်ပူ)ပါက Paracetamol (အရည်/အခဲ) တိုက်ကျွေးနိုင်သည်။
(၅) လည်ချောင်းနာလျှင် ဆားရည်ဖြင့် ပလုတ်ကျင်းပေးနိုင်သည်။
(၆) အလွန်အမင်းယားယံ၍ နေရခတ်နေလျှင် အဝတ်သန့်သန့်ကို ရေနွေးဖြင့်တို့၍ သန့်စင်ပေးနိုင်သည်။ Calamine, Caladryl စသည့် ဆေးများလည်း လ်ိမ်းပေးနိုင်သည်။
(၇) ယားယံမှုသိပ်ဆိုးလျှင် Antihistamine ခေါ် ယားယံခြင်းကိုသက်သာစေသည့် ဆေးများ တိုက်ကျွေးနိုင်သည်။ (Steroid ဆေးဝါးများ (သောက်ဆေး၊ လူးဆေး) အသုံး မပြုသင့်ပါ)
(၈) ရေကျောက်အဖုလေးများကို ယားယံ၍ကုတ်မိရာမှ လက်သည်းမှတဆင့် ပိုးဝင် ရောက်ကာ ပြည်တည်ခြင်းနှင့် အမာရွတ်များဖြစ်စေနိုင်သဖြင့် ကလေးလက်သည်းကို ညှပ်ပေးထားရန်လိုသည်။ လက်သည်းညှပ်ပြီးလျှင်လည်း စူးရှမနေစေရန် တံစဉ်းဖြင့် ညှိပေးထားသင့်သည်။
(၉) ရေကျောက်ရောဂါရှင်၏ အဝတ်အစားများကိုလည်း သီးသန့်လျှော်ဖွပ်ပေးရမည်။
(၁၀) အဖျားမကျလျှင်၊ ရောဂါကူးစက်မှုပြင်းထန်လျှင်နှင့် အဖုများ၊ အနာများပိုးဝင်ပြီး ပြည်တည်နာများ ဖြစ်နေလျှင် လိုအပ်သောကုသမှုခံယူနိုင်ရန်အတွက် နီးစပ်ရာဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းသို့သွား၍ ဆရာဝန်နှင့်စနစ်တကျ တိုင်ပင်ကုသမှုခံယူရမည်။
(၁) အသက်(၅)နှစ်အောက်ကလေးငယ်များအား အသက်(၁)နှစ်တွင်တကြိမ် (၅)နှစ် တွင်တကြိမ် ကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ် ထိုးနှံခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်သည်။
(၂) ရေကျောက်လုံးဝမဖြစ်ဖူးသူ အသက်(၁၈)နှစ်အောက်လူငယ်များတွင်လည်း ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပြီး ကာကွယ်ဆေးကြိုတင် ထိုးနှံထားနိုင်သည်။
(၃) ရေကျောက်ရောဂါဖြစ်ပွားဖူးခြင်းမရှိသော မိခင်လောင်းများအနေနှင့် ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင် တလအလိုကတည်းက ကာကွယ်ဆေးများပြည့်စုံအောင် ထိုးထားခြင်းဖြင့် မွေးဖွားလာမည့်ကလေးအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်ပေးထားနိုင်သည်။
ကျောင်းပိတ်ရက်များအတွင်း ရေကျောက်ရောဂါကင်းစင်သူများ ဖြစ်ကြပါစေ….
Author : တင့်တယ်
ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှာ ဘာဆေးတှေ မသောကျရဘူးလဲ